အီလက်ထရွန်းနစ်ဘဏ်စနစ်. ဘဏ် ဆိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ ကို အသံ
ⓘ အီလက်ထရွန်းနစ်ဘဏ်စနစ်. ဘဏ် ဆိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ ကို အသံလှယ် စနစ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ Bank ဆိုသည်ကလည်း အီတလီစကား Banco မှဆင်းသက် ..
ဘဏ် ဆိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ ကို အသံလှယ် စနစ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ Bank ဆိုသည်ကလည်း အီတလီစကား Banco မှဆင်းသက်လာသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဘင်ကိုးဆိုသည်မှာ "ခုံ" ဟူ၍အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
E-banking စနစ်အောင်မြင်ရန် ဝန်းကျင်တစ်ခုတည်ဆောက် ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုဝန်းကျင်မှာ အီလက်ထရွန်းနစ် စနစ်အခြေခံ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးသည့်ဈေးကွက် ရှိနေရမည်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဘဏ်ကို ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း၊ ခရက်ဒစ်ကတ်များ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ငွေထုတ်စနစ် ATM နှင့် တိုက်ရိုက် ဘဏ်တွင်ငွေအပ်နှံနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ E-banking တွင် အရေးပါသည့်အခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ပေးဆောင်ရမည့် ငွေတောင်းခံလွှာများကို ဘဏ်မှတစ်ဆင့် အွန်လိုင်းပေးချေနိုင်မှု ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီး Smart card/ Smart money တို့ဖြင့် အမြန်ဆုံးငွေပေးချေနိုင်ခြင်းသည် e-banking ၏ အနှစ်သာရ ဖြစ်သည်။
1. PC Banking
အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ် ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများအနေဖြင့် ကွန်ပျူတာ PC မှ တစ်ဆင့် မိုဒမ် modem ကိုအသုံးပြုပြီး ဘဏ်သို့ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပီစီဘဏ်စနစ်သည် မိမိတို့ဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ်သူ၏ ကွန်ပျူတာအတွင်း ဘဏ်သုံးဆော့ဖ်ဝဲကို ကြိုတင် ထည့်သွင်းပေးထားပြီး အိမ်ရှိကွန်ပျူတာမှတစ်ဆင့် ဘဏ်သို့ ငွေကြေးကိစ္စများ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အိမ်သုံး မိုဒမ်မှတစ်ဆင့် ဘဏ်သို့ဆက်သွယ်ပြီး ဒေတာများကို download လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ပရိုဂရမ်များကို run ပြီး သိလိုသည့် အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မိမိတို့ ငွေစာရင်း account balance များအပြင် ကြွေးဝယ် credit card အနေအထားများကိုပါ စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ထို့ပြင် မိမိတို့ ဘဏ်စာရင်းမှ ပေးရန်၊ ရရန်ရှိ ကိစ္စများကိုလည်း ဘဏ်သို့ သွားစရာမလိုပဲ အိမ်ရှိကွန်ပျူတာမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ခိုင်းနိုင်သည့် စနစ်ဖြစ်သည်။
အင်တာနက်ဘဏ်စနစ်ဆိုသည်မှာ အင်တာနက်ရနိုင်၊ သုံးနိုင်သည့်နေရာတိုင်းတွင် မိမိတို့ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ဘဏ်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်မည့်စနစ်လည်းဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ဘဏ်စနစ်ကို ဘဏ်စနစ်ဟူ၍လည်း သုံးစွဲကြသည်။
3. EFT စနစ်
အီလက်ထရွန်းနစ်ဘဏ်စနစ် ဆိုသည်မှာ ၂၄ နာရီဘဏ်ဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစနစ်ဖြစ်သည်ဟူ၍လည်း ဆိုကြသည်။ ATM automated teller machine ဆိုသည့် ငွေထုတ်စက်များ ထွန်းကားလာသောကြောင့်လည်း e-Banking စနစ်ထွန်းကားလာရသည်။ ငွေပေးငွေယူစနစ်များကို Direct Deposite of paycheck စနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ငွေစုနိုင်ခြင်း၊ ဘဏ်တွင် ငွေစာရင်း ဖွင့်နိုင်ခြင်းတို့သည် အခြားအီလက်ထရွန်းနစ်ဘဏ်စနစ်၏ ထူးခြား ချက်များဖြစ်သည်။
အီလက်ထရွန်းနစ်ဘဏ်စနစ်ကို EFT electronic fund transfer စနစ်ဟူ၍လည်းခေါ်ဆိုသေးသည်။ စာရွက် စက္ကူများဖြင့် ပေးပို့ စစ်ဆေးနေရမည့်အစား အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းပညာဖြင့် ပေးပို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ EFT စနစ်သည် မိမိငွေစာရင်းကို သတ်မှတ်ထားသည့်စက်အတွင်း ကတ်များ သို့မဟုတ် code များ ကိုဖြည့်စွက်ပြီး ငွေထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်သည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းကုမ္ပဏီကြီးများတွင် ATM စနစ်ဖြင့် ငွေစာရင်းဖွင့်ထားသည့် debit ကတ်များကို အသုံးပြုကာ PIN personal identification numbers များရိုက်သွင်းပေးထားပြီး ငွေထုတ်သုံးစွဲနိုင်စေရန် လည်း စီစဉ်ပေးထားသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ၁၉၇၈ ခုနှစ်ကတည်းက EFT Act ကို ထုတ်ပြန်ပေးထားပြီး အစိုးရမှ အကာအကွယ်ပေးထားသည်။
4. PSP စနစ်
PSP payment service provider စနစ်သည် အွန်လိုင်း ငွေပေးငွေယူစနစ်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ ကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ် credit card ၊ ဘဏ်ကိုအခြေခံသည့် ငွေပေး စနစ်များဖြစ်သော direct debit, bank transfer နှင့် real time ဘဏ်ငွေပေးချေစနစ်ဖြစ်သော အွန်လိုင်းအခြေခံဘဏ်စနစ်များကို အခြေခံထားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် PSP စနစ်အတွက် FinCEN Financial Crimes Enforcement Network အဖွဲ့ကြီး၏ ကြီးကြပ်ဆောင် ရွက်စီမံပေးမှုကိုယူရသည်။ ထိုအဖွဲ့သည် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူ ရပြီး ငွေပေးငွေယူစနစ်များတွင် ငွေခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်သမားများ၏ငွေကြေး၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုများ ဟုတ်မဟုတ်တို့ကို စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသည်။
5. Credit and Smart Card စနစ်
E-commerce လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ခရက်ဒစ်ကတ် credit cards များသည် အသုံးအများဆုံးစနစ်ဖြစ်သည်။ မြောက်အမေရိကတိုက် တွင် ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းသော အွန်လိုင်း B2C ငွေပေး ချေမှုစနစ်သည် ခရက်ဒစ်ကတ်များကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။ အွန်လိုင်း အရောင်းစနစ်တွင် credit and debit ကတ်စနစ်ကိုသာ အသုံးမပြုပါက လုပ်ငန်း တွင်ကျယ်မည်မဟုတ်ပေ။ ကတ်အတည်ပြု နံပါတ် CVN card verification number ကို လုံခြုံမှုအတွက် အသုံးပြုကြသည်။ ထိုသတ်မှတ်ထားသည့်နံပါတ်ကို ကတ်၏ကျောဘက်တွင် signature strip အနေဖြင့် သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ထိုနံပါတ်သည် ဘဏ်နှင့် ကတ်ကိုင်ဆောင်သူတို့၏ ဆက်သွယ်မှုကိုပြဆိုသည်။ အွန်လိုင်း ကုန်သွယ်မှုစနစ်တွင် ကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ်များကို အသုံးပြုရာ၌ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာကြရ သည်။ လုံခြုံသည့်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်း protocol ကိုသာ အသုံးပြု ကြရပြီး သေချာစိတ်ချရသည့် လိုင်းများဖြင့် Visa and Mastercard သာ အသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်။ သို့ဖြစ်ရာ CA certification authority မှတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့် ခရက်ဒစ်နှင့် ဒက်ဘစ်ကတ်များကိုသာ အသုံးပြုရန်လည်းလိုသည်။
မြောက်အမေရိကတွင် ခရက်ဒစ်ကတ်သုံးမှုတွင်ကျယ်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်တို့တွင် ခရက်ဒစ် ကတ်အသုံးပြုမှုတွင် လုံခြုံမှုအတွက်ပြဿနာရှိနေသေးသည်။ ယခု အခါ Smart card များအသုံးပြုမှုတွင်ကျယ်လာကြောင်းတွေ့ရသည်။ စမတ်ကတ်ဆိုသည်မှာ ခရက်ဒစ်ကတ်နှင့်အတူတူဖြစ်ပြီး စမတ်ကတ်များတွင် 8-bit microprocessor ကို ထည့်သွင်းပေး ထားပြီး အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေ electronic cash အဖြစ်အသုံးပြု နိုင်သည်။ ရောင်းသူနှင့် သုံးသူကြားတွင်အပြန်အလှန် ပေးချေနိုင် သည့် အသွင်ဆောင်လာသည်။ စမတ်ကတ်ကို ရှေးပြေးတီထွင် သူများတွင် VISA စမတ်ကတ်သည်ထင်ရှားသည်။ VISA စမတ် ကတ်ဖြင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေလဲလှယ်နိုင်ပြီး၊ ဘဏ်ရှိ မိမိ ထည့်ထားသော ငွေစာရင်းထဲမှ မိမိဝယ်ယူသလောက်ကို နုတ်သွား မည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ စမတ်ကတ်ဖြင့် အင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီး လက်လီဆိုင်တိုင်းတွင် ဝယ်ယူသည့်စနစ်ခေတ်စား လာခဲ့သည်။
6. အီးကောမာ့စ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ဘဏ်စနစ်
အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အီးကောမာ့စ် e-commerce စနစ်သည် အကျိုးများသည့် စနစ်တစ်ခုဖြစ် လာသည်။ ထိုစနစ်ကို e-banking၊ e-tailing နှင့် online publishing သို့မဟုတ် online retiling စနစ်များက အထောက်အကူပြုလျှက်ရှိသည်။
6.1. အီးကောမာ့စ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ဘဏ်စနစ် အစဉ်အလာငွေပေးချေမှုစနစ်
6.2. အီးကောမာ့စ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ဘဏ်စနစ် အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်
Credit နှင့် debit ကတ်များကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အလိုအလျောက် ငွေထုတ်စက် ATM automated teller machines များကို အသုံးပြုခြင်း၊ stored value ကတ်များနှင့် e-banking စနစ်များ ကိုအသုံးပြုခြင်း။
6.3. အီးကောမာ့စ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ဘဏ်စနစ် အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေပေးစနစ်၏အရေးပါမှု
အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ် EPS electronic payment system သည် ဝယ်သူနှင့်ရောင်းသူကြားတွင် ငွေကြေးကို အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့်ပေးချေရာ၌ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိရိယာ၊ ခရက်ဒစ် ကတ်နံပါတ်၊ အီလက်ထရွန်းနစ် ချက်လက်မှတ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေသား တစ်ခုခုဖြင့် ဘဏ်အားကျောထောက်နောက်ခံထားခြင်း၊ ကြားခံငွေကြေးဖလှယ်ပေးသူ သို့မဟုတ် တရားဝင် ငွေကြေး ထိန်းသိမ်းပေးသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လည်း တိုင်းတာရပါသည်။ အထူးသဖြင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေပေးစနစ်ကို ကမ္ဘာ့စံအဖြစ်သုံးနေချိန်တွင်၊ အသုံးမပြုနိုင်သေးသည့် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံသည် ခေတ်နောက်ကျကျန် နေခဲ့မည်သာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ဘဏ်စနစ်ကို လည်ပတ်ရာ၌ ဝန်ဆောင်မှုအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးနိုင်သည့်စနစ်မှာ e-banking စနစ်သာဖြစ်သည်။
ခရက်ဒစ်ကတ်ကို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအနေဖြင့် အသုံးမပြုနိုင် သေးပါက အီးကောမာ့စ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် များစွာနှောင့်နှေးနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ ခရက်ဒစ်ကတ်အသုံးပြုရာတွင် တိကျသည့် သဘောတူညီချက် မျိုးရှိရန် လိုသည်။ ဥပမာ signature ဖြစ်သည်။ ကတ်ပိုင်ဆိုင်သူတစ်ဦးသည် ငွေပေးချေမှုမပြုမီ ငွေကြေးအရ ခိုင်လုံမှုတစ်ခုခုကိုပြရန်လိုသည်။
7. E-tailing စနစ်
8. Electronic Money စနစ်
Electronic money ဆိုသည်မှာ ငွေ သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံကို အီလက်ထရွန်းနစ် နည်းစနစ်ဖြင့်သာ အပေးအယူ၊ အလဲအလှယ် ပြုလုပ်ခြင်းကိုခေါ်ဆိုသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ပိုက်ဆံကို ဟူ၍လည်း အမျိုးမျိုး ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲကြသည်။
အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေကြေးစနစ်ကိုသုံးစွဲရာတွင် ကွန်ပျူတာ Network ၊ အင်တာနက်နှင့် digital stored value စနစ်များသည် မဖြစ်မနေပါဝင်လာရသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းဖြင့် ငွေကြေး လွှဲပြောင်းခြင်း EFT Electronic Funds Transfer နှင့် တိုက်ရိုက်ဘဏ်တွင်ငွေအပ်နှံခြင်း direct deposit များသည်လည်း အီလက် ထရွန်းနစ် ငွေကြေးသုံးစွဲရာတွင်အရေးကြီးသည်။ ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်များကို နည်းပညာဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ထိန်းသိမ်းရခြင်းသည်လည်း ဤစနစ်တွင်ပါဝင်သည်။
ဟောင်ကောင်တွင်အသုံးပြုသည့် Otopus ကတ်စနစ်သည် ခရီးသွား transit payment စနစ် အနေဖြင့်စတင်သုံးစွဲခဲ့သော်လည်း အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေကြေးစနစ်အဖြစ် ကျယ်ပြန့်စွာသုံးစွဲလာခဲ့ကြသည်။ စင်ကာပူတွင် အီလက်ထရွန်းနစ်ပိုက်ဆံကို အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ရထား၊ ဘတ်စ်ကား များအတွက် အခကြေးငွေပေးဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ စင်ကာပူတွင် အသုံးပြုသည်ကတ်စနစ်သည် ဟောင်ကောင်တွင်အသုံးပြုသည့် ကတ်စနစ်နှင့်တူညီပြီး FeliCa ကတ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ နယ်သာလန် နိုင်ငံတွင် အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေကြေးစနစ်ကို Chipknip ဟူ၍ခေါ်ဆိုသည်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် AMT နှင့် AVR နည်းစနစ်သုံး အလိုအလျောက်ငွေထုတ်စက်များ ထွန်းကားရေးသည် အီးကောမာ့စ်ကို များစွာအထောက်အကူပြုနေကြောင်းတွေ့ရသည်။ အသေးစားဘဏ်များကအစ အင်တာနက် ဘဏ်များဖြစ်ရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဖို့လိုပါသည်။ အလယ်အလတ်နှင့် အထက်တန်းအဆင့် ဝင်ငွေရှိ သူများအား အာရှတွင် McKinsey မှသုတေသနပြုကြည့်ရာ ၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့် အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ သည်ဟုဆိုသည်။ တရုတ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံများတွင် အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ် အသုံးအများဆုံးဟုသိရသည်။ အာရှတွင် အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ် အသုံးပြုမှုနှုန်းသည် နည်းသေးသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်များကို ကန့်သတ်ခြင်းကလည်း နှောင့်နှေးစေသည့် အချက်ဟုဆိုရမည်။ လုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝ တာဝန်ယူနိုင်စွမ်း မပေးနိုင်လျှင် ဘဏ်အပေါ်စိတ်ဝင်စားကြမည် မဟုတ်ပေ။ အွန်လိုင်းဖြင့် အသုံးပြုရန် ဘဏ်များတွင် ငွေစာရင်းလာမဖွင့်ကြခြင်းသည် အင်တာနက်အသုံးပြုရန် ရုပ်ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထား မပြည့်စုံခြင်း ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာ မသုံးနိုင်၊ လျှပ်စစ်မီးအပြည့်အဝမရ၊ အင်တာနက်က နှေးလျှင် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဘဏ်များကိုဆက်သွယ်ရခြင်းအပေါ် စိတ်ဝင် စားမှု လျှော့ပါးစေနိုင်ပါသည်။
Telephone banking စနစ်သည် တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တယ်လီ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ရာတွင် အလိုအလျောက်ဖုန်းဖြေကြားသည့်စနစ်ကို ဘဏ်မှအသုံးပြုရသည်။ ဖုန်းများတွင် အသံကိုမှတ်မိစေသည့် voice recognition စနစ်ကိုထည့်သွင်းထားရသည်။ ဘဏ်ကိုဖုန်း ဖြင့် ဆက်သွယ်လိုက်သည်နှင့် ပထမဦးဆုံး သက်သေခံအထောက် အထားအဖြစ် ဂဏန်းများကို Password အနေဖြင့် ရွတ်ပြရသည်။ သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးအတွက် စီမံထားသည့်အတိုင်း မေးခွန်းအနည်း ငယ်ကိုဖြေကြားပေးရသည်။ တယ်လီဖုန်းဘဏ်စနစ်သည် ငွေထုတ် ခြင်း၊ ငွေအပ်နှံခြင်းမပြုနိုင်သည်ကလွဲပြီး ဘဏ်တွင်မိမိအပ်ထားသော ငွေများထဲမှ ငွေစာရင်း balance ကိုစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီတာခ၊ ဖုန်းဘီလ်များပေး ဆောင်ခိုင်းစေနိုင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
မိုဘိုင်းလ်ဘဏ်စနစ် Mobile banking ကို ဟူ၍လည်းခေါ်ကြသည်။ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ၊ ငွေစာရင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အခွန်အခများပေးဆောင်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှ တစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် မိုဘိုင်းလ်ဘဏ်စနစ်အား SMS စနစ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မိုဘိုင်းလ်အင်တာနက်စနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်ကတည်းက လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ထိုသို့လုပ် ဆောင်နိုင်ရန် clients ဟုခေါ်သည့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံး ပရိုဂရမ်ကို ဖုန်းထဲတွင် သီးခြား download ယူထားရမည်ဖြစ်သည်။
အစဉ်အလာဘဏ်လမ်းကြောင်းသည် သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာသို့သွားပြီး ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ် အီလက်ထရွန်းနစ်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် အိမ်တွင်း အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းတွင် စတင်ခဲ့ သည်ဟုဆိုရ မည်။ ၁၉၈ဝ ခန့် ကတည်းက အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုစတင်နေကြောင်း မှတ်တမ်းများ အရသိရသည်။ အွန်လိုင်း Online ဆိုသည့်စကားကလည်း ၁၉၈ဝ လောက်တွင် ခေတ်စားလာသည်။ အွန်လိုင်းကို ထိုအချိန်က ကီးဘုတ်၊ တီဗီမော်နီတာ ကိုအသုံးပြုပြီး အဝေးမှနေ၍ တယ်လီ ဖုန်းမှတစ်ဆင့် ဘဏ်၏ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့သည် ဟုဆိုရမည်။
အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို နယူးယော့ခ်တွင် ၁၉၈၁ ခုနှစ်က တည်းက စတင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အဓိကဘဏ်ကြီးများ ဖြစ်သော တွင် အိမ်တွင်းဘဏ်စနစ်ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်ခဲ့သည်။ ထိုဘဏ်များတွင် Videotex စနစ်ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော် Videotex စနစ်သည် ထင်သလောက်ခရီးမပေါက်ခဲ့သဖြင့် အောင် မြင်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ ပြင်သစ်တွင် Videotex စနစ်သည် Minitel ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းခြင်းကြောင့် အောင်မြင်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ဗြိတိန်တွင်လည်း Prestel စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်ကို Bank of Scotland တွင် ၁၉၈၃ ၌စတင်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်တွင်အသုံးပြုသည့် စနစ်မှာ Prestel စနစ်ဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုရသည်။ ကီးဘုတ်ကိုသုံးပြီး တယ်လီဖုန်းစနစ်ဖြင့် ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ရသည့် စနစ်ကို Homelink ဟူ၍ခေါ်သည်။ မော်နီတာတွင် ဘဏ်နှင့်ဆက် သွယ်လုပ်ဆောင်ရသည့် လုပ်ငန်းအားလုံးကို customer ကတွေ့မြင် နေရပြီး၊ မိမိငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ပါ သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် ဘဏ်အများစုသည် အင်တာနက်ကိုအခြေခံသည့် အင်တာနက်ဘဏ်များ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဘဏ်ဆိုသည်မှာ ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်မီစီးပွားရေးစနစ်တွင် ငွေကြေးကိစ္စရပ်များကိုသာမက နည်းပညာများ နှင့်ပါ မျက်ခြေမပြတ်စေရန်ကြိုးစားရင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းကို ပြည်သူအတွင်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေရန် ဆောင်ရွက်လာကြသည်။ အစဉ်အလာဘဏ် စနစ်သည် ကန့်သတ်ချက်များခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အဆင်မပြေခြင်း၊ အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် ဘောင်အတွင်း၌ သာဆက်ဆံနေရခြင်း၊ ငွေကြေးများကို အထုတ်အထည်နှင့် သယ်ဆောင်ရသဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို အာမမခံနိုင်ခြင်းစသည့် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်နေရသည်။ လူတိုင်းက မိမိတို့ငွေကြေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး၊ ဒေသမရွေး လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ စီမံပိုင်ခွင့်၊ ခံစားပိုင်ခွင့်များကို လိုလားတောင့်တလာကြသည်။ ထိုဆန္ဒများကို အများဆုံးဖြည့် ဆည်းပေးနိုင်သည့်စနစ်မှာ ခေတ်မီနည်းစနစ်များသာဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် အစဉ်အလာ ဘဏ်စနစ်ကို ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်လာကြောင်း ဝေဖန်သုံးသပ်လာကြသည်။
အခြေခံစီးပွားရေးစနစ်ကို မည်မျှအသွင်ပြောင်းလဲစေကာမူ ဘဏ်လုပ်ငန်းကို အသွင်ဟောင်း အမြင်ဟောင်းဖြင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေပါက စီးပွားရေးစနစ်ကို အောင်မြင်စေရန် အကောင် အထည်ဖော်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ အလားတူ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်သစ် ကို အသွင်သစ် အမြင်သစ်ဖြင့် မည်မျှပြုပြင်ပြောင်းလဲသည်ဆိုစေ နိုင်ငံတော်၏ အခြေခံစီးပွားရေးစနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ ပါကလည်း မအောင်မြင်နိုင်ပေ။ နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးစနစ်နှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်သည် ဆက်စပ်နေသကဲ့သို့ ခေတ်မီနည်းပညာများနှင့် မျက်ခြေပြတ်ကျန်ခဲ့လျှင်လည်း တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း သတိပြုရမည်ဖြစ်ပေသည်။
Archived4December 2013 at the Wayback Machine.
Archived 19 November 2014 at the Wayback Machine.